ကမ္ဘောဒီးယား (4771) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (2708) မြန်မာ (2491) ဗီယက်နမ် (1789) ထိုင််း (1407) တရုတ် (450) အင်ဒိုနီးရှား (267) ဖိလစ်ပိုင် (267) မလေးရှား (259) စင်္ကာပူ (236) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (234) တီမော လက်စ်တေ (157) ကိုကိုး (ကီးလင်း) က... (146) ခရစ္စမတ်ကျွန်း (145) အိနိ္ဒယ (137) Global (133) ဂျပန် (126) သီရိလင်္ကာ (125) ကိုရီးယားသမ္မတနိင်ငံ (120) မွန်ဂိုးလီးယား (120) ဟောင်ကောင် (117) ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်... (115) မဲခေါင် (28) Asia-Pacific (18) အာရှ (15) အရှေ့တောင်အာရှ (12) ဘင်္ဂလားဒေရှ် (8) နီပေါ (8) ဘူတန် (7) မေ်ာလ်ဒိဗိ (7) ဩစတေးလျ (6) ကွတ်ကျွန်း (6) မိုက်ခရိုးနီးရှား ဖ... (6) ကီရီဘာတီ (6) မာရှယ်ကျွန်း (6) နယူးဇီလန် (6) ပလော (6) ထွန်းဂ (6) ဆာမိုအာ (6) အာဖဂန်နစ္စတန် (5) အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆာမ... (5) ဂူအန် (5) အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ... (5) ကီဂျစ်စတန် (5) ကာဇက်စ်တန် (5) မကာအို (5) မြောက်မာရီယားနား (5) နော််ရူး (5) နိယူအဲ (5) ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား (5)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (6124) ခမာဘာသာစကား (2486) ဗမာဘာသာစကား (1049) လာအို (644) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (604) ထိုင်း (162) တရုတ် (9) ပြင်သစ် (4) English (2) အင်ဒိုနီးရှား (2) ဂျပန် (1) Karen (1) ကိုရီးယား (1)
ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထ... (1116) မြေယာ (981) အစိုးရ (626) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတ... (613) စီးပွါးဖြစ် မြေယာလု... (527) မြေယာအမျိုးအစားများ (501) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွ... (477) လူဦးရေနှင့် သန်းခေါ... (453) ဥပဒေနှင့် တရားစီရင်ရေး (442) လူဦးရေ (423) ပြည်သူပိုင် မြေငှါး... (422) ဥပဒေရေးရာမူဘောင်များ (417) အစိုးရပိုင်မြေ (415) သစ်တောမူဝါဒ နှင့် အ... (403) အုပ်ချုပ်ရေး (402) အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်... (386) တိုင်းရင်းသားလူနည်း... (369) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (367) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (303) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (294) ကပ်ရောဂါ (270) အစိုးရစနစ် (270) သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း နှ... (269) စိုက်ပျိုးရေး (251) သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်... (249) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (247) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (242) Sustainable develop... (236) စီးပွါးရေးနှင့် ကုန... (222) ရပ်ရွာလူထုပိုင် သစ်တော (217) အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ (217) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (207) သစ်တောများ နှင့် သစ... (200) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင... (196) ရေအရင်းအမြစ်များ (194) ကုန်သွယ်ရေး (185) နိုင်ငံတော်မှကန့်သတ... (178) ကြိုးဝိုင်းဧရိယာများ (177) ရွေးကောက်ပွဲများ (175) လူ့အခွင့်အရေး (171) စီးပွါးရေးဆိုင်ရာမူ... (170) ပြည်သူပိုင်မြေ (166) အလုပ်သမား (148) စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်... (145) ဇီဝမျိုးကွဲများ (143) မြေယာနှင့်ဆိုင်သော ... (143) အခြေခံအဆောက်အဦများ (139) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (135) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (132) စွမ်းအင် (131)
ကမ္ဘောဒီးယား 141 Sub-decree 2021၊ 14 ဩဂုတ် ပြည်သူပိုင်မြေ, မြေယာ, မြေယာအမျိုးအစားများ, သစ်တောမြေဧရိယာ ဖုံးလွှမ်းမှု, အစိုးရပိုင်မြေ
ကမ္ဘောဒီးယား 140 Sub-decree 2021၊ 13 ဩဂုတ် ပြည်သူပိုင်မြေ, မြစ်ချောင်းများ နှင့် ရေကန်များ, မြေယာ, မြေယာနှင့်ဆိုင်သော မူဝါဒနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး, မြေယာအမျိုးအစားများ, အစိုးရပိုင်မြေ
ကမ္ဘောဒီးယား 142 Sub-decree 2021၊9ဩဂုတ် ပြည်သူပိုင်မြေ, မြေယာအမျိုးအစားများ, အစိုးရပိုင်မြေ
Sub-Decree No. 142 was madeadecision of the abolition of Sub-Decree No. 125, dated August 11, 2020 on the area of ​​Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh. This...
ကမ္ဘောဒီးယား 100 Decision 2021၊ 21 အောက်တိုဘာ စီးပွါးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး
ကမ္ဘောဒီးယား 140 ကြေညာချက် 2013၊7မေ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေးမူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး, လူထုအခြေပြု ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
ကမ္ဘောဒီးယား 138 Sub-decree 2021၊ 12 ဩဂုတ် ပြည်သူပိုင်မြေ, မြေယာအမျိုးအစားများ, အစိုးရပိုင်မြေ
Sub-Decree No. 138 was reclassified an area of ​​150,651 (one hundred and fifty thousand six hundred and fifty-one) square meters in Sangkat Kork Roka, Khan Prek Pnov, Phnom...
ကမ္ဘောဒီးယား 176 Sub-decree 2021၊2စက်တင်ဘာ ပြည်သူပိုင်မြေ, မြေယာအမျိုးအစားများ, အစိုးရပိုင်မြေ
The Sub-decree No. 176 was reclassified the area of ​​43,946 square meters (forty-three thousand nine hundred and forty-six square meters) located in Sangkat Kork Roka, Khan...
ကမ္ဘောဒီးယား 174 Sub-decree 2021၊ 31 ဩဂုတ် ပြည်သူပိုင်မြေ, မြေယာအမျိုးအစားများ, အစိုးရပိုင်မြေ
This Sub-Decree No. 174 was reclassifiedaland of ​​100 (one hundred) hectares in Sangkat Ponhea Pon, Khan Prek Pnov, Phnom Penh, pursuant to Sub-Decree No. 20, dated February...
ကမ္ဘောဒီးယား 177 Sub-decree 2021၊2စက်တင်ဘာ မြေယာအမျိုးအစားများ
The Sub-decree No. 177 was reclassified the area of ​​285000 square meters located in Sangkat Kork Roka, Khan Prek Pnov, Phnom Penh, pursuant to the Sub-Decree No. 20, dated...
ကမ္ဘောဒီးယား 461 Decision 2021၊ 21 အောက်တိုဘာ ကပ်ရောဂါ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး
ကမ္ဘောဒီးယား 456 Decision 2021၊ 20 အောက်တိုဘာ ကပ်ရောဂါ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး
ကမ္ဘောဒီးယား 60 Guideline 2021၊ 21 အောက်တိုဘာ ကပ်ရောဂါ, ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
ကမ္ဘောဒီးယား 1026 Decision 2015၊ 10 စက်တင်ဘာ ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
ကမ္ဘောဒီးယား 175 Sub-decree 2021၊ 1 စက်တင်ဘာ မြေယာ, မြေယာအမျိုးအစားများ